IE ကို TAB ကို ADD-ON FIREFOX အတွက် - MOZILLA FIREFOX - 2019
IE ကို Tab ကို add-on 'Mozilla Firefox browser ကိုများအတွက်
အချို့ဂိမ်းအဘို့, ဥပမာ, အွန်လိုင်း shooters အဘို့, တကမြင့်မားတဲ့ frame ကိုနှုန်း (တစ်စက္ကန့်ဘောင်) အဖြစ်ပုံရိပ်၏ဤမျှလောက်အရည်အသွေးအရေးကြီးသောမဟုတ်ပါဘူး။ ဤသည်အလျင်အမြန် screen ပေါ်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတုံ့ပြန်နိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်။
အများဆုံးရုပ်ပုံအရည်အသွေးအရယူသကဲ့သို့သူတို့သတ်မှတ်ထားကြသည် AMD Radeon drivers တွေကို default ။ ကျနော်တို့စွမ်းဆောင်ရည်တခုတခုအပေါ်မှာမျက်စိနှင့်အတူဆော့ဖျဝဲကို configure နှင့်ဤအရပ်မှအမြန်နှုန်းပါလိမ့်မယ်။
AMD ၏ဗီဒီယိုကဒ် settings ကို
အကောင်းဆုံး setting များကိုတိုးမြှင့်ဖို့ကူညီ FPS ပုံကပိုချောချောမွေ့မွေ့နဲ့လှပတဲ့စေသည်ဖြစ်သောဂိမ်းပါ။ ကြီးမားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုမျှော်လင့်ထားပေမယ့်အချို့ setting များကိုပိတ်ထားခြင်းဖြင့်အနည်းငယ်ရိုက်ချက်များ "ညှစ်" အလိုတော်ပုံရဲ့အမြင်အာရုံအမြင်အပေါ်အနည်းငယ်သာသက်ရောက်မှုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။
ဗီဒီယိုချိန်ညှိခြင်း AMD ၏ Catalyst Control Center ကို၏နာမတော်အားဖြင့်ဆော့ဖ်ဝဲ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်အထူးဆော့ဖ်ဝဲအကူအညီနဲ့, ဝန်ဆောင်မှုကဒ် (ယာဉ်မောင်း) နှင့်အတူရာအရပ်ကိုကြာပါသည်။
နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ပရိုဂရမ် settings မှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုသင်နိုင်ပါတယ် PKM Desktop ပေါ်မှာ။
ပါဝင်သည်အလုပ်ရိုးရှင်းဖို့ "စံကိုယ်စားပြုမှု"အပေါ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် "န့်သတ်ချက်များ" အဆိုပါမျက်နှာပြင်ရဲ့အထက်ညာဖက်ထောင့်မှာ။
ကျွန်တော်ဂိမ်းကစားဘို့အ settings ကိုထိန်းညှိဖို့စီစဉ်ကတည်းကပြီးနောက်သင့်လျော်သောအပိုင်းကိုသွားပါ။
ထို့နောက်ကို select လုပ်ပါ Sub-အမည်ရ "ဂိမ်းစွမ်းဆောင်ရည်" နှင့် link ကို click နှိပ်ပြီး "ပုံမှန် settings ကို 3D ပုံရိပ်တွေကို".
အရည်အသွေးနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအား၏တာဝန်ခံချိန်ခွင်လျှာများ၌တွေ့မြင် slider ကိုယူနစ်၏အောက်ခြေတွင်။ ဒီတန်ဖိုးကိုလျှော့ချ FPS အတွက်သေးငယ်တဲ့တိုးရလိမ့်မယ်။ , checkbox ကို Remove ကျန်ကြွင်းရစ်သောအစွန်းရောက်ဖို့ slider ကိုရွှေ့နှင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Apply".
နောက်ကျောအပိုင်းကိုသွားပါ "ဂိမ်းများ"က "ပေါင်မုန့်အစအန" တွင်ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ကပိတ်ပင်တားဆီးမှုလိုအပ်ပါတယ် "ပုံရိပ်အရည်အသွေး" နှင့်လင့်ခ် "တင်ပါသည်".
ငါတို့သည်လည်း (အားလုံး checkboxes ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ"လျှောက်လွှာ settings ကိုအသုံးပြုပါ" နှင့် "Morphological filtering ကို") ထို slider ကိုရွှေ့ "အဆင့်" လက်ဝဲ။ filter ကိုတနျဖိုးကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည် "ထောင့်ကွက်"။ နောက်တဖန် Hit "Apply".
တဖန်အပိုင်းကိုသွား "ဂိမ်းများ" နှင့်ဤအချိန်က link ကို click "ချောနည်းလမ်းကို".
ဒီယူနစ်ခုနှစ်တွင်လည်းလက်ဝဲရန် slider ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
အောက်ပါ setup ကို - "Anisotropic filtering ကို".
ဒီ option ကို configure လုပ်ဖို့, လာမယ့်ရန် checkbox ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ "လျှောက်လွှာ settings ကိုအသုံးပြုပါ" နှင့်ဆီသို့ slider ကိုရွှေ့ "Per-pixel နမူနာ"။ settings ကိုလျှောက်ထားရန်မေ့လျော့မနေပါနဲ့။
အချို့ကိစ္စများတွင်ဤလုပ်ရပ်များအရှိဆုံးပြောင်းလဲနေသောဂိမ်းတစ်ခုအားသာချက်ကိုပေးမည်ဖြစ်သော 20% အားဖြင့် FPS ကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။